မ.ပြီဟေ့ မ.ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မ.ပြီဟေ့ မ.ပြီ
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Dec 8, 2010 in Business & Economics |7comments
( အာရောဂျံ ပရမံလာဘ ( လာဘံ ဟူ၍ မခေါ်ရ လာဘ ဟူ၍သာ ခေါ်လေ ) ဥစ္စာ ငွေကြေး ရာထူးစည်းစိမ် ကာမကုံ စသည် လူသားများ၏ လာဘ်လာဘ တကာ တို့ တွင် ကျမ္မာခြင်း ဟူသော လာဘ် လာဘ သည် အဖိုးတန်ဆုံး ဖြစ်လေ၏ဟု ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တော် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်အား ဆရာတော် တစ်ပါးမှ ပြန်လည် ဟောပြောခြင်းကို မှတ်သားဘူးလေ၏။ မှန်ပေသည် ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝ သော လောကီချမ်းသာ အဖြာဖြာ ကို ရုပ်ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြင့် ခံစား စံစားနိုင်ရန် ကျမ္မာသော အကြောင်းတရားသည် ထို ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်၌ မရှိပါမူ အချဉ်းနှီးပေတည်း။ )
ကျမ္မာသော ရုပ်ခန္ဓာကိုယ် ကို ရရှိထားကြသော်လည်း သုံးစွဲစရာ အသပြာ ငွေစက္ကူများ မရှိကြ၍ သွားကြားထိုးတံ မှ သည် ရင်ခုန်သံ ကဗျာ လေး များအထိ ကို ပိုင်ဆိုင်ဘို့ ဆိုရာမှာ ရေခန်းနေကြကုန်သော သူသူငါငါ တို့ အတွက်မူ ဗလာနတ္ထိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထင့်။ ငွေဆို၍လည်း ပေါ့ပေါ့ သေးသေး မတွက်လိုက်ပါနဲ့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီး ကေဂျာနူး ကေဂျာစုတ် အပြဲ အရွဲ ( စာဖွဲ့ မကုန်အောင် စုတ်ပြတ်သော ငွေစက္ကူ ) တွေချည်း သုံးစွဲနေကြရပါတဲ့ ရွှေမြန်ပြည်မှ SUPER BIGBOSS များကို ဂရုဏာတော့ သက်မိပါသည် ခုနစ်ရက်သားသမီးတို့ ၏ သီးခြေကြိုက် ငွေဆိုသော အရာအား တော်ရုံ ဘုန်းတခိုးနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ရပြန်သော်လည်း ခပ်ပြဲပြဲတွေသာ ဖြစ်သည်ကို ထပ်မပြောလိုတော့ပါ။ သို့ သော် ( တီးလုံးသံခပ်ပြင်းပြင်း) ဒ ဒန်…တန်တန် တဒူတူတူ ပူ…. PP ..EB …p…ရွာသူရွာသားများ ….. အားမငယ်ကြကုန်လင့် ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကို ( လောကီနယ်မှ ) အားကိုးကြ ကုန်စေသတည်း။
ကြားဘူးကြပေလိမ့်မည် ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံ၊ အလျှင်လို လမ်းအိုလိုက် ဟူသော ထိုစကားကို ဆန့် ကျင်သည်ဟူ၍ မထင်ကုန်လင့် တွေးသိ လျှင် ပြေးကြည့်တာထက် မှန်စေရမည် ချောင်းကြိုချောင်းကြား မြောင်းကြို မြောင်းကြား ဂျောင်ကြို ဂျောင်ကြား ပေါင်းစုံမှာ ပြိတ္တာဖြစ်နေတာကို မသိဘဲ တာဝရိန်တာနတ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ရှိနေကြတဲ့ နတ်လေပွေတွေ (တိုက်ချိုင်မှု့ ချိရင် ခွင့်ယွတ်ပါ မီတုကိုမ မချိုယိုပါ) ပြောတာထက် လွယ်တဲ့ နည်းကို ပေးပါမည်။ ဘာမျှမခက်ခဲပါ ဖဲရိုက်တတ်လျှင် ချဲတွက်လို့ ရပြီ။ တောင်ပေါ်ဒိုင်မှာ အပီအော ရေလာမည် ရေတွင်း ရေကန်တွေ သနားသည် ရေတခွန်က အဘိုး ခေါ်ရလိမ့်မည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း လက်ရှိ ထွက်သည့် ဂဏန်းကို တည်ပြီး အဆင်လိုက် ရေးပြီး သတ်ဂဏန်းများ ပယ်လိုက်လျှင် ပေါက်ဂဏန်းကိုရမည်။ အောင်P အောင်P အောင်P။ ဘိုးတော်အောင်ပု မP။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ့်ရွာသားများဖြစ်လို့စေတနာ ဗလပွနဲ့ ပေးတာနော် သူများကို ပြန်မရှယ်ကြနဲ့ သိလား တော်နေကြာ HOT သွားရင် ငတ်နေ အုန်းမယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ကြ သိလား။ လောဘလည်း မကြီးနေကြနဲ့ ဦး။
ဒါကတော့ ယ္ခု 2010 ခုနှစ် အစကနေ ယနေ့ အချိန်ထိ ထွက်ပြီးသား ဂဏန်းတွေ ကို အစဉ်လိုက်တွက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် အစတွေကို တွက်ပြထားပြီးပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့ နှစ်ပတ်ကိုတော့ လွယ်လွယ်လေးသာ တွက်ချက်ရယူ ကြပေတော့ဗျို့ ။
2010 ခုနှစ် ချဲပေါက်စဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
008 ဒါကတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ဆရာ ဂျိမ်းစ် ပု ရဲ့ နံပါတ်ပါဗျို့ 
– – – ( ဒီ ကျန်တဲ့ နှစ်ပါတ်တွက်ကို တော့ ကျွန်ုကိုချည်း အားမကိုးကြကုန်လင့် )
– – – ( လက်သည် ကိုဘဲ အားမကိုးနေနဲ့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း လည်း နည်းနည်း ညှစ်အားပေးကြ)
ဘိုးတော် အောင်ပု မ ..ပြီးသည့်နောက် ဝီစကီသတင်းများမှ ပေါက်ကြားသွားသည့် ထိပ်တန်း သတင်းသုံးခုမှာ ကိုပေါက် မန္တလေးမှ ခြောက်ဆယ့်ငါးကျပ်သား ကိုကြောင်ကြီးမှ လေးဆယ်သားနှင့် ရွာသဂျီးမှာ နှစ်ကျပ်ခွဲသားမျှသာ ရှိ၏ဟူသတတ်။
ဘိုးတော်ပုရေ ကတ် သရီး အတွက်တို၁$ ဆိုင်၅၀၀$ ဘဲ ရမှာဗျ သူဋ္ဌေးချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ မီမီလီယံအကွတ်ထုတ်ပေး ရင် ဘိုးတော်ပုကို ကိုယ်း ကွယ်သူတွေ ပိုများလာမယ်ထင်တယ် ဆရာပုရေ
ဘိုးတော်ပုရေ ကတ် သရီး အတွက်တို၁$ ဆိုင်၅၀၀$ ဘဲ ရမှာဗျ သူဋ္ဌေးချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ မီဂါမီလီယံအကွတ်ထုတ်ပေး ရင် ဘိုးတော်ပုကို ကိုယ်း ကွယ်သူတွေ ပိုများလာမယ်ထင်တယ် ဆရာပုရေ
ဘိုးဘိုးပုရေ ပေးချင်ရင်လည်း ဒဲ့ပေးဗျာ (မင်ဘာမောင်ဒဲ့ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်)၊ ချဲစကားတွေ သိပ်မသုံးပါနဲ့ နားမလည်ဘူး၊ ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့။
မ တာတော့ မ တာဘဲ.. ကြွ မကြွ ဘဲ ကွာမယ်.. ပုတဲ့ လူ မရင်တော့ သိပ်ကြွမှာ မဟုတ်ဘူး
ဘိုးတော်ပု သတ်ဂဏန်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိရမလဲ။ ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ၀ါသနာလည်းပါတယ်။ ဟီး…ဟီး
ဘိုးတော်ပုက ရဲမဟုတ်ပါဘူးနော်။ akhaing.t@gmail.comကို သတ်ဂဏန်းရှာနည်းသင်ပေးပါ။ အခုတင်တဲ့ဟာက နောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အကြောင်းပြန်စာကိုမျှော်လျှက်……….
သေချာပေါက်ဂဏန်းရပီဆိုတော့ ဒိုင်လေးဘာလေးခွဲထိုးကြရအောင် တော်ကြာဒိုင်ပြေးမှ ရွာသားတွေတော့တေပီပဲ